पर्यटकिय गन्तव्य ‘महावु’ - Paschimnepal.com
ति लाटो गोठालाले शिवलिङ्ग भेटाएको कुरा कसैलाई न भनेर नित्य पूजा गर्ने र दूध चढाउनु पर्ने शर्तानुशार उनी मुख बोल्ने र वेद समेत पढ्न सक्ने भएका थिए । महाबुधाम शिवलिङ्गलाई लोटो आचार्यले कसरी भेटाए भन्ने कुरामा फरक फरक तर्कहरू रहेका छन् । केही तर्कहरू यस प्रकार रहेका छन् :-
१. शाके ११३७ ताका दैलेख, भूर्तीगाउँका आचार्य ब्राहमणका बोल्न नसक्ने छोरा चलु आचार्यले अहिले शिवलिङ्ग रहेको स्थानको ढुंगामा काँचो दूध चढाउनु शिवको दर्शन मिल्नेछ भन्ने सपना देखेपछि लामो समयसम्म दूध चढाएपछि शिव दर्शन पाई वेद पढ्नसक्ने भएको किंवदन्ती अहिलेपनि कायमै रहेको छ । “बर्षभरी हुने अन्न अभाव हटाउन, गाईबस्तु र मानव जीवनको अकाल मृत्यु बचाउनका लागि शिवको भब्य पुजापाठ गरिन्छ । एउटामात्र वर मागे पुरा हुने बिश्वास अहिलेपनि कायमै छ ।
२. महाबुगाथ रहेको स्थान निकै रमणिय पाटन क्षेत्र र सम्म परेकोले यहाँ दैलेख, कालिकोट, जुम्लालगायतका स्थानबाट भैसी, भेँडाबाखा्र चराउने उद्देश्यले गोठालाहरु गोठ निर्माण गरेर बस्ने गर्दथे । शाके ११३७ ताका दैलेख, भूर्तीगाउँका गर्गगोत्रीय आचार्य ब्राहमणका बोल्न नसक्ने छोरा चलु आचार्यले अहिले शिबलिङ्ग रहेको स्थानको ढुंगामा काँचो दूध चढाउनु शिवको दर्शन मिल्नेछ भन्ने सपना देखेपछि लामो समयसम्म दूध चढाएपछि शिव दर्शन पाई वेद पढ्नसक्ने भएको किंवदन्ती अहिलेपनि कायमै रहेको छ । टुँगा फुटेर ढुँगाकै शिवलिगं उत्पती भएको स्वरुप अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।
३.दैलेख भुर्तीका आचार्य कुलका लाटो बाहुनले धेरै गाइहरू पालेका थिए । उनको एक गाइको दूध निकाल्दा दूध न निस्किने भयो । यो गाइले दूध के गर्दो रहेछ भनेर गाइको चियो गर्दा जुन ठाउँमा अहिले शिवलिङ्ग रहेको छ त्यो स्थानमा त्यो गाइले सधैं दूध चढाउने गर्दो रहेछ । यो देखेर लाटो गोठालाले त्यो ठाउँमा के रहेछ भनी हँसियाको टुप्पोले कोट्याएर हेर्दा शिवलिङ्ग देखियो । त्यस पछी महादेव प्रकट भएर लाटो गोठालालाई तिमीले मलाई सधैं दूध चढाउने गर्नु र यहाँ शिवलिङ्ग देखेको कुरा कसैलाई पनि नभन्नु । यसो गरेमा तिमी बोल्न सक्ने हुने छौ भनेर अन्र्तध्यान भए । ति लाटो आचार्यले महादेवले भने अनुसार गरेकाले उनी बोल्न सक्ने भएका थिए ।
(गाथ) महावु धाम मा गरिन पुजा
महावु नजिकैको दमौडा भन्ने स्थानमा महावै (महाभय) र जगन्नाथको ठूलो पूजा हुने गर्दछ । भगवान् शिवको उत्पत्ति भएको शिवलिङ्गमा दैलेखका आचार्य र कालिकोटका ब्राहमणहरूले प्रत्येक वर्षको पूर्णिमा पूजामा दूधको धारासँगै पूजापाठ गरेपछि मात्र देशभरिका अन्य स्थानहरूमा रहेका देवी देवताहरूको पूजा हुने प्रचलन अहिलेपनि कायम रहेको छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्यता सम्पादन गर्नेे
महावुबाट दैलेखका सम्पूर्ण भुभागहरू एकएक गरी छुट्याएर देख्न सकिने भएर पनि महत्वपूर्ण हेरिने गरिएको छ । मध्य तथा सुदुरपश्चिम र भारतबाट समेत दशौं हजार भक्तजनहरू साउनको जनैपूर्णिमामा घुईचो लाग्ने गर्दछ । सवारी साधनको प्रयोग गरे दैलेख सदरमुकामबाट ४ देखी ५ घण्टामा उनपाटा पुग्न (हिउँदमा मात्र) सकिन्छ । महावु अर्को विशेषता कर्णाली अञ्चल प्रवेश गर्ने सवैभन्दा छोटो मार्ग समेत हो । महावु भएर कर्णाली प्रवेश गर्दा ४८ किलोमिटर छोटो पर्ने ईन्जिनियरहरुको भनाई छ ।
अहिले मुलुकमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने तयारीमा छ । देश संचालन गर्ने नेता र नेतृत्वहरुले भित्रि मनबाट चाहना गरेनन् भने यो परिवर्तन पनि संस्थागत हुन नसक्ने आशंकाहरु त्यतीकै देखिएका छन् । केही नेता र राज्य संचालन गर्ने नेतृत्व यस्ता देखिएका छन् जसले पश्चिम नेपालका ऐतिहाँसिक धरोहरहरुको कुनै मुल्य नै नभएको ब्याख्या र विश्लेषण समेत गर्ने गर्दछन्
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन २४, २०७४ 9:23:08 AM
Prevजिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा एमालेको प्यानल विजयी
Nextसमयमा उपचार नहुँदा सुत्केरीको मृत्यु